musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Lufthansa Inobhururuka 76,000 Vanhu Vanobva kuFrankfurt Airport paKutanga Kwezororo Svondo
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kutanga kwezororo rezhizha muHesse: Lufthansa inokurudzira kusvika kunhandare yendege munguva yakanaka.
Iine 192 nzvimbo dzekuenda, iyo ndege inopa kunyange kwakawanda kwendege kwadzinobva kuFrankfurt ino zhizha.
Lufthansa inopa zvinopfuura chiuru nemazana masere ekubatana kwevhiki, 1,800 muzana yekubatana kubva pre-Corona nguva.
Inonzwisisika yekuchengetedza hutano pfungwa, iyo yakaunzwa neboka reLufthansa pakutanga kwedenda, inoramba ichiona kubhururuka kwakachengeteka.
Kutanga kwezororo muHesse: 76,000 vanhu vanoenda pazororo na Lufthansa kubva Frankfurt Airport pakupera kwevhiki kwekutanga kwezororo. Iine 192 nzvimbo dzekuenda, ndege yendege inopa kunyange kwakawanda kwendege kubva kuFrankfurt kupfuura muzhizha ra2019 uye, iine anopfuura 1,800 masvondo ekubatana, 55 muzana yekubatana kubva pre-Corona nguva, iine kuwedzera kuri kuitika. Panguva imwecheteyo, nyika zhinji dzinoramba dzichida mamwe magwaro senge zvitupa zvekuyedza kana zvekudzivirira. Nechikonzero ichi, Lufthansa inokurudzira kuti vanofamba nayo vawane ruzivo pamberi uye vasvike panhandare nenguva.
Avo vanonetsekana nekushaya zvitupa zvakakodzera zverwendo vanogona kuti vatariswe neLufthansa Service Center panhandare dzakasarudzwa kusvika maawa makumi manomwe nemaviri vasati vaenda. Izvi zvinogona kusanganisira humbowo hweyedzo, akapona COVID-72 chirwere uye majekiseni. Kusimbiswa kwekupinda kwedhijitari kunyorera kunogona zvakare kuongororwa. Izvi zvinoita pamberi kuti magwaro anodiwa aripo. Lufthansa inokurudzira kuti vashanyi vayo varambe vakatakura zvitupa zvepakutanga zvakadhindwa navo parwendo, kuwedzera kune humbowo hwedigital.
Ndeapi magwaro anodikanwa uye uko COVID-19 bvunzo dzinogona kuitwawo parwendo rwekudzoka dzinogona kuwanikwa pane webhusaiti yeLufthansa. Zvekudzokera kuGerman, antigen yekuzviongorora-uchishandisa nzira yevhidhiyo-ident ikozvino inogamuchirwa uye inogona kutengwa pamhepo.
Kune rwendo rwakasununguka, Lufthansa inokurudzira kushandisa akasiyana siyana masevhisi epamhepo kutarisa-mukati uye kutakura mukwende. Panhandare yendege yeFrankfurt, vafambi vanogona kutarisa mukwende yavo yemahara pane iripo dhiraivha-kuburikidza kubva zvino kusvika kupera kwezororo. Izvi zviri nyore kubva pamakumi maviri nemaviri kusvika maawa maviri usati wasimuka, kana zvichidikanwa zvakare zvakanyatsobatanidzwa nedrive-kuburikidza neCOBV bvunzo.